Tora Kuchengetedzwa Kwekuchengetedza Zviri Nyore Kupfuura Kare
Features » Dziviriro Dhipatimendi
Shingairira iko kuunganidzwa, kuchaja, uye kudzoka kwemasevhisi ekuchengetedza neyedu otomatiki ekubhuka kugadzirisa.
Nepo varidzi vazhinji vachikwezvwa neinogona kunge yakakwira mari yekudzosa yenguva pfupi yekurendesa, mubvunzo wekuti vanodzivirirwa sei kubva mukuba kana kukuvara unouya mune ingangoita hurukuro imwe chete inochengetedzwa nekambani kambani ine varidzi. Uye chaizvo zvakadaro, sezvo zvichizivikanwa zvakaoma kuzivisa zvizere vashanyi vari kubhuka kuti vagare kwehusiku hushoma.
Kunze kwekutenga inishuwarenzi yakakwana, imwe nhanho inotorwa nevazhinji vevanochengetedza kuchengetedza dzimba dzekuzorora kana dzimba dzekugara dzakachengetedzwa ndeyekuchengetedza dhipoziti kubva kuvashanyi. Nepo izvi zvichigona kuitwa pamberi pekuuya nenzira dzekukumbira kubhadharwa kubhangi, kudzichengeta uye kudzoreredza huwandu hwakakodzera panguva yakakodzera kunogona kuve musoro chaiwo. Nepo mari inochengetwa pakusvika inokwanisika kune anogara-mukati makamuri, kune ari kure anotarisirwa zvivakwa ichi hachisi-chekutanga.
Zeevou's Security Deposits ingabatsira sei?
Zeevou yakagadzira akati wandei akasarudzika maficha maererano nekutora, kubhadharisa, uye kudzoka kwenzvimbo dzekuchengetedza. Sechikamu cheZeevou's 5-Nhanho Kubhuka Kusimbisa Maitiro, vashanyi avo chiteshi chekubhuka kana mumiririri vasingapi vimbiso yekukuvara, vanofanirwa kupfuudza 3-D Yakachengeteka tarisa kuti kadhi ravo risati-ratenderwa huwandu hwenzvimbo yekuchengetedza yaunotsanangudza kune yega chivakwa.
Zeevou anobata mari idzi zvinoenderana netsika yenguva yaunogona kutsanangura, semuenzaniso kubva pazuva risati rasvika kusvika mazuva maviri mushure mekubva. Izvi zvinoona kuti kana kiredhiti kadhi ikatadza kufanobvumidza kuchengetedzwa, muenzi anogona kutumirwa otomatiki meseji ine 3-D Yakachengeteka Link kuti apedze kuchengetedzeka dhipoziti mvumo. Kune rimwe divi rekubhuka, zvinotendera vachengeti vemba kutarisa unit uye kumhan'arira chero nyaya kuburikidza neyavo Mobile Anwendung mari isati yaburitswa. Nenzira iyi, unogona kubhadharisa zvirinyore zvinhu zvisipo, zvinokuvadza chivakwa, kana kutyora mitemo yepamba, kusvika pamuganhu wepamberi-mvumo yekuchengetedza dhipoziti usingatombonetsekana nemari isingachavepo pakadhi remushanyi.
Kana iwe uchichaja dhipoziti yekuchengetedza, zvinobva zvawedzera kune iyo invoice yakapedziswa iyo yakapa kune mumwe nemumwe muenzi kana achinge akanyorwa seakaiswa mukati me maitiro. Uyezve, kuwedzera kuongorora kwevashanyi uye mubhadharo muunganidzwa, iyo inobudirira pre-mvumo yechengetedzo dhipoziti inogona kumisikidzwa seinodiwa mamiriro ekutarisa-mune mirairo inokonzereswa kune vashanyi. Nenzira iyi iwe unogona kuzorora uine chokwadi chekuti vaenzi havazokwanise kuwana chako chivakwa kunze kwekunge wavharwa.
As mutsetse haitenderi kuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kunochengetwa kupfuura mazuva manomwe, timu yedu kuZeevou yakagadzira yakasarudzika auto-yekuchaja uye auto-yekudzosera chinhu kubata kuchengetedzwa kwenzvimbo yevagari vachishandisa Stripe. Maitiro acho anoshanda nenzira imwechete yekufanotungamira mvumo uye kutora pre-mvumo kana paine nyaya, zvisinei hazvo mari inobhadharwa zvizere uye zvishoma kana kudzoserwa zvizere kumuenzi zvichitevera kugara kwavo pasi peiyi sarudzo zvichienderana nemamiriro ezvinhu.